China Pens sy Enclousers Coop amin'ny akoho famokarana tariby ary famokarana | Tian Yilong
Pens sy Enclousers akoho amam-borona akoho tariby
Hexagonal Wire Netting, karazana harato hexagonal miolakolaka, manana toetra manokana mety ampiasaina amin'ny fananganana. Izy io dia mora ampiasaina amin'ny vala akoho sy tranom-boankazo, ary mora volavolaina sy bobongolo. Ary matetika koa io no ampiasaina amin'ny fefy fiompiana akoho amam-borona, toy ny akoho.
Pens sy mpanentana
tariby fatotra annealed mainty
tariby mamatotra annealed mainty
Akoho akoho akoho tariby tariby 1 '' 3ft x 100ft ho an'ny penina sy mpanentana
Hexagonal Wire Netting, karazana harato hexagonal miolakolaka, manana toetra manokana mety ampiasaina amin'ny fananganana. Izy io dia mora ampiasaina amin'ny vala akoho sy tranom-boankazo, ary mora volavolaina sy bobongolo. Ary izanydia matetika ampiasaina hamehezana biby fiompy akoho, toy ny akoho.
Wire Double miaraka amin'ny tariby ambony sy ambany
Miaraka amin'ny Wire nohamafisina ho an'ny 1m (2), 1.5m (4), 2m (5), fa tsy misy vidiny fanampiny
Manoro hevitra: ny harato tena izy dia miankina amin'ny famolavolana sy ny fananganana tranom-baravarana, aviary na peninao ihany koa. Aza hadino ny mandray ny savaivon'ny tariby, ny lavarangana ary ny haben'ny horonan-taratasy rehefa mifantina harato ho an'ny tetikasa iray. Ny savaivon'ny tariby, ny vava ary ny haben'ny horonan-taratasy dia azo alamina ihany koa.
MOMBAMOMBA NY VOKATRA hahavony NY FAHARETANY nisara- WIRE DIA.
TONGOTR'IZY TONGOTR'IZY mirefy habetsahan'ny
Hexagonal Wire Netting 3 150 1 18
Hexagonal Wire Netting 4 150 1 18
Hexagonal Wire Netting 5 150 1 18
Hexagonal Wire Netting 6 150 1 18
Manaraka: Fampiroboroboana lozisialy any PaddleTennis court, nandrisika taorian'ny fanenomana, Gauge 16, 1 Inch
Jono metaly bitika tariby, mafana - atsobika ...
Garden Fefy Stainless Steel Akoho Wire harato ...
2 santimetatra tenona PVC mifono Rabbit Wire Netting Wit ...
Hexagonal Chicken Wire Netting Ho an'ny Game Bird Fl ...
Mametaka tariby tariby akoho / Refy beton ...